လက်ထပ်ခွင့်အတွက် Yes လို့ အဖြေပေးလိုက်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့် - Zeekwat Hot News
July 12, 20190918
စံရတီမိုးမြင့် တင်လိုက်တဲ့ ပုံရိပ်အချို့မှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းထားတဲ့ surprise ဖြစ်စေမယ့် အခန်းအပြင်အဆင်နဲ့ လက်စွပ်လေးကြောင့် ပရိသတ်များ မှင်သက်အံ့သြသွားရပါတယ်။ သူတို့ သဘောကျချစ်ခင်ရတဲ့ Idol တစ်ဦးဖြစ်သလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုလို့ ပရိသတ်များ ကြေကွဲခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စံရတီမိုးမြင့်က Merry Me လို့ ရေးထားတဲ့ အခန်းလေးထဲမှာ မတ်တပ်ရပ် ပို့စ်လေးပေးရင်း “I said Yes! 💫🦋” လို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ မရှေးမနှောင်းလေးမှာပဲ လက်သန်းကြွယ်မှာ ၀တ်ထားတဲ့ လက်စွပ်လေးကိုလည်း ပို့စ်တင်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်များ အုံ့အုံ့ကျွတ် ဆူညံသွားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စံရတီမိုးမြင့်က “ကြော်ငြာပါကွာ” ဆိုပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စံရတီမိုးမြင့်က မကြာသေးမီက ကျရောက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက် နှစ်နေရာကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက ကင်ဆာဆောင်မှာ လူဦးရေ (၂၅၀) စာအတွက် နေ့လည်စာကို လှူဒါန်းဒါနပြုခဲ့ပါတယ်။ သန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာက ရဟန်း၊ သီလရှင်၊ ဘိုးဘွား ဂီလာနတို့အပြင် ရိပ်သာမှာလာရောက်ကူညီနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား Volunteer များအပါ လူအယောက် (၃၀၀၀) ကိုပါ သားသတ်လွတ် နေ့လည်စာ လှူဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စံရတီမိုးမွငျ့ တငျလိုကျတဲ့ ပုံရိပျအခြို့မှာ လကျထပျခှငျ့တောငျးထားတဲ့ surprise ဖွဈစမေယျ့ အခနျးအပွငျအဆငျနဲ့ လကျစှပျလေးကွောငျ့ ပရိသတျမြား မှငျသကျအံ့သွသှားရပါတယျ။ သူတို့ သဘောကခြဈြခငျရတဲ့ Idol တဈဦးဖွဈသလို ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကောငျမလေးဖွဈတာကွောငျ့ လကျထပျတော့မယျဆိုလို့ ပရိသတျမြား ကွကှေဲခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
စံရတီမိုးမွငျ့က Merry Me လို့ ရေးထားတဲ့ အခနျးလေးထဲမှာ မတျတပျရပျ ပို့ဈလေးပေးရငျး “I said Yes! 💫🦋” လို့ ဖွလေိုကျပါတယျ။ မရှေးမနှောငျးလေးမှာပဲ လကျသနျးကွှယျမှာ ဝတျထားတဲ့ လကျစှပျလေးကိုလညျး ပို့ဈတငျပွလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျမြား အုံ့အုံ့ကြှတျ ဆူညံသှားခဲ့ပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ စံရတီမိုးမွငျ့က “ကွျောငွာပါကှာ” ဆိုပွီး ပွနျလညျဖွရှေငျးပွထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
စံရတီမိုးမွငျ့က မကွာသေးမီက ကရြောကျခဲ့တဲ့ သူမရဲ့မှေးနလေ့ေးအတှကျ နှဈနရောကို လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးက ကငျဆာဆောငျမှာ လူဦးရေ (၂၅၀) စာအတှကျ နလေ့ညျစာကို လှူဒါနျးဒါနပွုခဲ့ပါတယျ။ သနျလငျြသဘာဝတရားရိပျသာက ရဟနျး၊ သီလရှငျ၊ ဘိုးဘှား ဂီလာနတို့အပွငျ ရိပျသာမှာလာရောကျကူညီနတေဲ့ နိုငျငံခွားသား Volunteer မြားအပါ လူအယောကျ (၃၀၀၀) ကိုပါ သားသတျလှတျ နလေ့ညျစာ လှူဒါနျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။